निर्मला प्रकरणमा अपराध कबुल गर्नेहरुको डिएनए नमिल्दा आश्चर्यमा परे : प्रम ओली - Tamang Online
काठमाडौं– ‘निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या गर्ने मानिसहरु खुलेआम हिडिरहँदा पनि सरकार के हेरेर बसेको छ ? के हामी बालबालिकाको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिन सक्दैन? दैनिक १५ सयदेखि २ हजार युवा विदेशिनबाट रोक्न तपाईसँग के कस्ता योजनाहरु छन्? सरकारको यति धेरै लगानी हुँदाहुँदै पनि किन सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदै गइरहेको छ? सरकारले किन नेपाली भाषालाई वेवास्ता गर्दै अंग्रेजीलाई धेरै प्राथमिकता दिएको? नेपालको धेरै स्थानमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समयसम्म पनि पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा कसरी डिजिटलाइज्ड नेपालको परिकल्पना गर्ने? उस्तै किसिमको शिक्षा हासिल गर्दा पनि किन पारिश्रमिकमा विभेद हुने गरेको?’ मंगलवार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा स्कुले बालबालिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग यस्ता प्रश्न सोध्ने अवसर पाए। यो अवसर जुराइदिएको थियो नेपाल स्काउटले। उपत्यकाका १४ विद्यालयका विद्यार्थीले स्काउटको पहलमा प्रधानमन्त्रीसँग साक्षात्कार गर्न पाए। कार्यक्रमको नाम दिइएको थियो– ‘बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री’। कार्यक्रममा बालबालिको प्रश्न सुन्न र जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओली पत्नी राधिकासहित उपस्थित थिए।
« तामाङ महिला घेदुङको दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न (Previous News)
(Next News) बैंकिङ प्रणाली एकीकृत गरी सुरु भयो पूर्ण स्वचालित अनलाइन , के–के कुरामा ध्यान दिने ? »